बृहत विशेष : बृहतको कार्यक्षेत्र | गृहपृष्ठ
Home घर संसार बृहत विशेष : बृहतको कार्यक्षेत्र
बृहतले आफ्नो कार्यक्षेत्रलाई विशेषगरी ‘थ्री आरई’ सँग जोडेर परिभाषित गर्ने गरेको छ ।
रियल इस्टेट इन्भेष्टमेण्ट
यसअन्तर्गत कम्पनीले आवासीय र व्यापारिक प्रयोजनका सम्पत्तिका साथै जग्गा तथा भवन किनबेच वा परियोजना विकास गर्ने गर्दछ । आवास परियोजनाहरु विकास गर्दा वातावरण संवेदनशिलतालाई समेत ध्यानमा राखेर वातावारणमैत्री परियोजना निर्माण गर्ने कम्पनीले बताएको छ । सोहीअनुरुप कम्पनीले काठमाडौंको रामकोट गाविसमा ‘बृहत कम्युनिटी लिभिङ’ नामक हाउजिङ परियोजना विकास गरेको छ ।
बृहत् कम्युनिटी लिभिङ – रामकोट
बृहत इन्भेष्टमेण्ट्सले विकास गरेको यो परियोजना नेपालकै पहिलो वातावरणमैत्री सामूदायिक आवास हो । काठमाडौंको सितापाईलादेखि २ दशमलव ४ किलोमिटर पश्चिमतर्फ रामकोट गाविसमा अवस्थित यो आयोजनामा ७० वटा छुट्टाछुट्टै घर छन् । कुल २८ रोपनीमा विकास गरिएको यस आयोजनामा ३ देखि १० आनासम्मको क्षेत्रफलमा बनाइएका विभिन्न १० प्रकारका घरहरु छन् । जसको मूल्य न्युनतम रु. ६९ लाख ९९ हजार ९ सय ९९ देखि अधिकतम रु. २ करोड ५३ लाख ६९ हजार ९ सय २५ सम्म तोकिएको छ । यी घरहरुको निर्मित क्षेत्रफल (बिल्ट अप एरिया) १ हजार ५ सयदेखि २ हजार ८ सय २० वर्गफिटसम्म छ ।
विभिन्न वातावरणमैत्री उत्पादन तथा प्राणालीयुक्त यस परियोजनामा हालसम्म ३१ घर निर्माण भएसकेका तथा ५ घर निर्माणधिन छन् । यीमध्ये बस्नका लागि तयारी (रेडी टु मुभ इन) अवस्थामै रहेका ८ घरमात्र बिक्री हुन बाँकी रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । केही घरमा आवास धनी बस्नसमेत थालिसकेको पनि कम्पनीले बतायो । घर निर्माण गर्न बाँकी ‘प्लट’हरुको पनि बृहतले बुकिङ खुला गरेको छ ।
वातावरणमैत्री अवधारणामा विकास गरिएको यो आयोजना काठमाडौंकै आकर्षक सामूहिक बसोवास आयोजनामध्येमा पर्छ । बृहतले आफ्ना हाउजिङ परियोजना मध्यशहरी क्षेत्रभन्दा केही परको स्थान वा निकट गाविसमा विकास गर्ने बताएको छ । र, परियोजना विकास गर्दा खेतीयोग्य जमिनमा नगरेर प्रायः चक्रपथबाहिर मूल शहरीक्षेत्रको नजिक रहेको अनउत्पादनशील जमिन नै रोज्ने कम्पनीले बताएको छ । बृहत कम्युनिटी लिभिङ पनि सोहीअनुरुपको हुनुका साथै उत्तिकै शान्त र सुन्दर भौगोलिक बनोटमा विकास गरिएकाले पनि आकर्षक छ ।
पछिल्लो समयमा खाद्य सुरक्षा संसारकै सबैभन्दा संवेदनशील तथा जटिल विषयका रुपमा अघि आएको छ । यसलाई नै दृष्टिगत गरी उत्पादनशील जमिनलाई आवासक्षेत्र बनाउन नहुनेमा कम्पनीका अध्यक्ष ओम राजभण्डारीको जोड छ । विभिन्न कम्पनीअन्तर्गत राजभण्डारीको नेतृत्वमा हालसम्म निर्मित प्रायः सामुदायिक बसोवास परियोजना चक्रपथबाहिरको गाविसमै विकास गरिएका छन् ।
मूल शहरीक्षेत्रमा पूर्वाधारले धान्न सक्नेभन्दा बढी रहेको जनघनत्वलाई शहरीक्षेत्रबाहिर सारेर जनसंख्याबमोजिम पूर्वाधार सुविधालाई सन्तुलित गर्दै व्यवस्थित शहरी विकासका लागि यस्तो अवधारणामा परियोजना निर्माण गरिने उनले बताए । यो पनि बृहतले आवास परियोजनाका लागि रामकोट रोज्नुको एक प्रमुख कारण हो । अर्को कारण, राजभण्डारीको नेतृत्वमा सितापाइलामा निर्मित पहिलो परियोजना ‘टीसीएच–१’ र रामकोट गाविसलाई आवास परियोजनाहरु निर्माणबाट जोड्दै चक्रपथ बाहिरको उक्त क्षेत्रलाई व्यवस्थित शहरको नमुनाका रुपमा विकास गर्ने महत्वाकांक्षी सोचका साथ कम्पनीले रामकोटमा आफ्नो पहिलो आयोजना निर्माण गरेको हो ।
प्राकृतिक सौन्दर्ययुक्त ग्रामीण परिवेशको अनुभव बृहतको रामकोट परियोजनाको अर्को मौलिक विशेषता हो । निर्माणमा प्रयोगित सामग्री, वास्तुकला, इञ्जिनियरिङ संरचना तथा भवन डिजाइन आदिका दृष्टिले यसअन्तर्गतका आवास उच्चस्तरीय रहेको कम्पनीको दाबी छ ।